Sina sy ny orinasa mpamatsy rano Mason Jar 16oz Hoyer
Ho an'ny antoko sy hetsika rehetra ataonay. Azo ampiasaina ho fanomezana ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fampakaram-bady, fankalazana, sns sns izy ireo. Aza hadino ny manadio alohan'ny hampiasana azy, satria ny HoyerGlass dia mamita baiko izay alefa mivantana avy ao amin'ny trano fanatobiana entana
Volume: 455ml / 16 oz
Haavo: 133mm / 5.25 santimetatra
savaivony: 105 * 79mm / 4.13 * 3.1 santimetatra
Ny flask mahazatra miolakolaka miaraka amin'ny kitapom-batana ary amboarina nopetahana - kaopy 16,5 oz
Mety amin'ny kojakoja fialam-boly mahazatra - BBQ, fety manokana, lanonana fampakaram-bady sy toe-javatra hafa mpiara-miasa zava-pisotro tsara indrindra.
Ny tànana mihetsika dia manome fikorotanana tsara; Ny tampony misy marika dia azo fehezina miaraka amin'ny sarobaka mason-javamaniry na mason-doha (tsy tafiditra) amin'ny fitehirizana stylish
Lead-maimaim-poana. BPA afaka, mateza ary mora diovina.
Ankafizo ny fisotroanao ao anaty fitaratra madio sy be mpitia indrindra 100%.
Na ianao tompon'ny hippest amin'ny rindrina na ny trano fonenanao dia mila fomba fiaina maro, ity Mason Jar ity dia lafatra tsara amin'ny haingoo. Fenoy zava-pisotro, haingon-trano, mpanendaka - na inona na inona. Amin'ireo kaopy mason-tsindrimandry ireto dia afaka mamadika izay hevitra tianao ho zava-misy ianao.
Size Boky: 455 ml Haavony: 13.3 cm Habe: 10,5 * 7.9 cm Boky: 16 oz H: 5.25 santimetatra Habe: 4.13 * 3.1 santimetatra
Color Hamafana ny fitaratra super-flint ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
Previous: 18oz Glass Bottles anaty rano ho an'ny zava-pisotro sy ranom-boasary vovoka Stainless vy mipetaka Caps Amin'ny famonoana entana
Manaraka: Tavoahangy tavoahangy misy kiraro vita amin'ny vera kosmetika
tavoahangy misotro vera
siny siny ho an'ny lakozia
tavoahangy rano tavoahangy
mason masira miaraka amin'ny tànana